I-China Cultural Stone-VNS-014BCB Ukukhiqiza neFektri | LONGSHAN
Itshe Lamasiko-VN ...
1. Kulula ukufakwa, futhi nge-p eshibhile ...
Ngalo mkhiqizo sibuye siwubize ngeqhwa elimhlophe pa ...
Ngomunye womkhiqizo odume kakhulu esitokisini ...
Lezi zinhlaka zesilayidi zemvelo zinamakheli ...
Lo mkhiqizo unemibala eminingi, ubukeka umuhle kakhulu ...
Igama Into: Multicolor Ukugqokwa Kwodonga Amaphaneli Amancane
Usayizi:100X360MM / 100X350MM
Isisindo: 27KG / M2
1. Amaphaneli Wodonga Oluzacile Amatshe ayimichilo emide yamatshe ahlelwe ngephethini. Zinamathiselwe ndawonye okungcono zisetshenziselwe ukumbozwa kwangaphandle nendawo yokufaka umlilo. Isethi ngayinye yethayela iqukethe inhlanganisela yombala oyisisekelo ofanayo, ongeza intshisekelo kanye nokwakha umuzwa oyingqayizivele wamatshe emvelo.
2. Imiklamo yama-Stone Wall Panels ingashintshwa ngokuya ngohlelo lokusebenza olucacile lwangaphakathi nangaphandle.Izinhlobonhlobo zokukhetha umbala futhi zihlangabezana kangcono nezidingo zemiklamo ehlukene.
Uhlelo lokumboza ngamatshe lwemvelo lulungele ukusetshenziswa kwangaphandle nangaphakathi. Ziza ngendlela yemodyuli futhi ziyashesha futhi kulula ukuzifaka. Zivame ukusetshenziselwa izindonga zesici, indawo enamachibi, amagceke, izindawo zokuzijabulisa, izindawo zomlilo zamatshe kanye nezici zamanzi.
Amanothi wokuthenga imikhiqizo
1. Sicela uvumele iphutha losayizi + -2mm, ngoba lisikwe ngesandla, Sicela ufake i-oda uma ungenankinga, ngiyabonga ngokuqonda kwakho
2. Sicela uqonde ukuthi umbala ungahluka kancane ngenxa yombala wemvelo.
1. Kungani ukhetha thina?
a. Imboni yethu idlulise ukuhlolwa kwe-BV, umphumela ulizinga B.
b. ISO9001: 2015 Isitifiketi
c. Sineqembu lethu le-QC, singaqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
d. Imboni yethu ibilokhu inikezela nge-ADEO, KINGFISHER, RONA, OBI ne-HOMEDEPOT iminyaka eminingi.
2. Bangaki abasebenzi efektri yakho?
Imboni yethu inabasebenzi abangama-99
3. Yasungulwa nini imboni yakho?
Imboni yethu yasungulwa ngo-1988, ineminyaka engaphezu kwengu-30 umlando.
4. Yini itheku lokulethwa?
I-Xingang, Tianjin, China
Ngokuvamile izinsuku eziyi-15 zingaqeda isitsha esisodwa ngemuva kokutholwa kwediphozi.
Ukupakisha okujwayelekile kungama-12pcs / ibhokisi, ama-112boxes / pallet, ama-20pallets / container.we futhi singavumelana nesicelo sakho sokupakisha.
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo yethu, sicela uxhumane nathi ngesikhathi, sizokunikeza impendulo egculisayo, vumela ukwaneliseka kwamakhasimende kube yinhloso yethu futhi silindele uphenyo lwakho.Imininingwane engaphezulu, sicela usithumelele i-imeyili:longshanshi@vip.126.com
Langaphambilini Usimende Stone-VNS-1120CZ
Olandelayo: Itshe Lamasiko-VNS-1308HWCB